China Canton Fair 2020 Dayrta, Warshada Soo dejinta iyo Dhoofinta Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kooxda Huaihai Holding Group
Canton Fair 2020 Dayrta, Shiinaha Soo Dejinta iyo Dhoofinta Cadaaladda
Qaabdhismeedka: Qaado qaab dhismeedka wareegga geedka isku-xidhka ah si uu ugu fududaado kala-guurka walxaha tuubbada iyada oo loo marayo geedi socodka foorarsiga, dhimidda farqiga u dhexeeya alxanka iyo alxamidda inta u dhexeysa tuubooyinka, iska ilaali culayska fekerka, xoogga sareeya iyo dallacaadda warshadaha adag ee alxanka inta lagu jiro alxanka;
Aynu ku soo bandhigno qaybta hore. Hadda waxaan arki karnaa geeska hore, xarkaha birta xitaa ballaadhan sida aan u arko, qaab dhismeed aad u adag. Waxaad ku ridi kartaa shandadaada ama koofiyadaada, aad ufiican. Marka ku xigta fargeeto hore, waxaan leenahay labo ka mid ah afarta shirkadood ee ugu sareeya iibinta, dhexroorkiisu waa φ27mm, waa hawo, waxaan ku shubeynaa saliid haydiyaam, taasoo bixinaysa waxqabadka nuugista fiican, waxay kaa dhigeysaa inaad ku raaxeysatid raaxeysiga xitaa xaalada wadada xun. Sidoo kale waad arki kartaa xiisaha, waa mid aad u siman oo dhalaalaya, oo muujinaya heerkayaga tayada sare leh ee qaybaha. Tani waa nal madax iyo iftiin rog rogmaya, dhammaantood way leeyihiinShahaadada EEC. Cabbirka rakibaadda ayaa la jaan qaadaya shuruudahaEEC. Halkan waxaa ku yaal miiska qalabka, waxaan ka heli karnaa howlo badan oo tricycle-kan. Marka hore waxay leedahay 2 gears, halkan waa badhanka lagu doorto Qalabka Dhabarka ah ama Qalabka Dib u noqoshada. Oo loogu talagay 'Forward gear', waxaa jira 3 nooc oo xawaare kala duwan ah oo lagu hagaajin karo, halkan waa badhanka lagu xusho Xawaare Sare, Dhexe ama Hoose. Haddiise aan adeegsanno qalabka gadaashiisa, waxaa jiri doona qaylo dhaan u digaya dadka lugaynaya gadaashaada. Waxaan ku arki karnaa macluumaadka xawaaraha mitirka LED-ka, sidoo kale waxay muujineysaa macluumaadka batteriga, macluumaadka iftiinka, xawaaraha hadda iyo macluumaadka gebi ahaanba. Aan ku tusiyo.
Hadda waxaan u jeednaa kursiga, sidaan horayba u soo sheegay, barkinta iyo dhabarka gadaal waa ergonomic, dhabarka ciriiriga leh iyo kursiga barkinta leh wadaha raaxada leh. Kursiga barkinta darawalka oo leh gambaleelka alaarmiga ee fadhiga, wuxuu dadka xasuusin karaa inay damiyaan tamarta markii ay ka baxaan gaariga, hubinta badbaadada darawalka iyo dadka kale. Kursiga hoostiisa ayaa ah batteriga, bateriguna waa 60V iyo 32 AH oo bixiya xaddiga dheer ee 50km. Aynu aragno hubka dusha sare leh, waxaan isticmaalnaa hal isku dhafan oo loo yaqaan tuubbo xoojin ah, oo aad u qaro weyn oo xoog badan. Waad arki kartaa inaan qaabeynno qayb kasta iyadoo la tixgelinayo nolosha dadka.Bandhigga Canton Online
Aynu u dhaqaaqno kursiga rakaabka, way ka weyn tahay kursiga darawalka oo waxay ku habboon tahay gabadh iyo cunug. Halkan waxaa jira fikir naqshad sixir ah, bal aan ku tusiyo, Kursiga ayaa laalaabmay, bal aan sariirta kor u qaadno oo aan kala furno, ka dib waxay noqotaa xamuul xamuul, waa mid aad u fiican, sax? Taasi waa meesha ugu weyn ee iftiimaya gaarigan, hal gaari laba xulasho, ku bixi lacag hal gaari, laakiin helitaanka laba gaari. Qofna ma diidi doono, sax? Canton Fair 2020
Qaybta ugu dambeysa waa xannibaadda gadaal, qaabku waa maqnaanshaha naxdinta gu'ga, waxaad siisaa fuul raaxo leh. Xarka dambe ee gadaal ayaa loo sameeyaa annaga qudheenna, waxaan doorannaa alaab-qeybiyaha ugu sarreeya ee alaabada firaaqada ah, sidaa darteed tayada ayaa si wanaagsan loo xakamayn karaa.
Hadda soo bandhigista qaabkani waa dhamaaday, soosocda waa waqtiga firaaqada ah, waa adiga waqtigaaga inaad noogu sheegto su'aalahaaga iyo shuruudahaaga, ka dib aniga iyo kaaliyahayaga gary-ga waxaan ku siin doonnaa jawaabta waqtiga.
Loading capaciCasharkii 127aad ee Canton Fair
Waa hagaag qof walba, waxay ku timid dhammaadka. Korantada korantadawaa badeecadaheena inta badan lagu soo bandhigo, waayo-aragnimo hodan ah ayaan u leenahay R&D iyo waxsoosaarka, waxaana u dhoofiyay in ka badan 86 wadan oo adduunka ah. Haddii aad jeceshahay alaabadayada, haka cabsan inaad nala soo xiriirto, fadlan u soo dir xiriiriyeyaashaada halkan, saaxiibkeen ayaa kula soo xiriiraya oo kuu soo diri doona faahfaahin dheeraad ah hadda.